Yini i-HTML Text Extractor? - Ukubuyekezwa kwe-Semalt
I-extractor yombhalo we-HTML yindlela elula yokubuka nokugcina umbhalo wekhasi lewebhu. Ngalesi thuluzi, ungakwazi ukuhlaziya amadokhumenti e-HTML futhi uthole ulwazi olunenzuzo kumzuzwana wemizuzwana. Uma ukhungathekile ngoba isayithi lingafundwa umbhalo futhi lifuna isisombululo esifanele, umklomelo wombhalo we-HTML uyisinqumo esihle kuwe.
I-extractor ye-HTML inezici eziningi - hat shops in perth western australia. Ezinye zazo zixoxwe ngezansi.
1. Kuyafaneleka kubahleli
Kubahleli nabangewona uhlelo, umklomelo wombhalo we-HTML uzokhipha amakhodi nombhalo kumakhasi ewebhu afunayo. Awudingi ukuba namakhono okuhlela ukusebenzisa leli thuluzi. Kunalokho, udinga ulwazi oluyisisekelo lwe-HTML ne-Python ukuze wenze umsebenzi wakho ufezeke. Leli thuluzi alifanele kuphela abahleli kodwa futhi namabhizinisi, ukuqala, izintatheli, kanye nabafundi.
2. Umqambi wombhalo we-HTML womklami wewebhu
Umklami wewebhu unesibopho sokudala imiklamo emihle namakhasi ewebhu okudala kumakhasimende akhe. Uma ungumklami wewebhu oqeqeshiwe futhi unenombolo enkulu yamafayela we-HTML ukuze akhiphe, kufanele uzame ukukhipha umbhalo we-HTML. Leli thuluzi liqinisekisa ukuvikelwa kwakho kanye nokuzimela kuwe ku-intanethi, ukukuthola idatha ekhishwe kahle. Ngaphezu kwalokho, iqoqa futhi iqoqe ulwazi kusuka kumafomu namavidiyo, okwenza kube lula kuwe ukwakha imiklamo ekhombisa ukufanekisa.
3. Umklomelo wombhalo we-HTML kuwo wonke uhlelo lokusebenza
Esinye sezici ezihlukile kakhulu zombhalo wombhalo we-HTML ukuthi ugijima kuzo zonke izinhlelo ze-Windows. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lingahlanganiswa nanoma yiziphi iziphequluli zewebhu futhi likhulu kubasebenzisi be-Windows 98, Me, 2000, NT, Vista, XP, no-8. Izovulela ifayela lakho futhi izokhipha umbhalo ngendlela efomethiwe.
4. Idala futhi ilawula amanxusa kanye nezikripthi
Ngomdabu wombhalo we-HTML, abakwa-webmasters bangadala futhi baphathe kokubili izikripthi nama-agent kalula. Iyakwenza izenzo zokulungisa izinto kalula futhi yenza imisebenzi ehlukahlukene kubasebenzisi bayo.
5. Ungaguqula idatha engakhiwe ngemininingwane ephathekayo
Ngomshini wombhalo we-HTML, ungaguqula idatha engakhiwe ukuze usebenzise ulwazi oluhle futhi olufundekayo ngokushelelayo. Awudingi ikhono lokuhlela ukusebenzisa leli thuluzi. Izoqala ukuskena amadokhumenti akho e-HTML futhi izohlinzeka okungenani izifanekiso ezingama-normalization ezingu-40 ongakhetha kuzo, okwenze kube lula kuwe ukungenisa idatha yakho.
6. Kuhle kumawebhusayithi wezindaba
I-New-York Times, i-CNN, i-BBC ne-Washington Post yizinye zezindaba ezidume kakhulu zezindaba. Ngomcibisholo wombhalo we-HTML, ungakwazi ukukhipha idatha kusuka kula masayithi kalula. Izokunikeza imiphumela yekhwalithi futhi ilungise wonke amaphutha amakhulu nezincane kalula. Ngalesi thuluzi, ungakha okuqukethwe kwekhwalithi bese uyishicilela kuwebhusayithi yakho ukuze uthole amazinga angcono okusesha injini.
7. Izinhlelo zokukhokha eziguquguqukayo
Okokugcina kodwa hhayi okungenani, idokhumenti yombhalo we-HTML ifanele ukuqala futhi iza nezinhlelo ezihlukile ze-premium. Ngokwesibonelo, ungakhetha uhlelo lwaso oluyisisekelo uma unobhulogi wangasese futhi ungeke ukwazi ukukhokhela ama-pricey deals. Uhlelo oluyisisekelo luzokhokhela u- $ 20 ngenyanga futhi luvula imithwalo yezici nezinketho zakho. Kodwa-ke, ukuhlolwa kwalo kwezinsuku ezingu-14 kuyatholakala.